GAAFFILEE 22’N Geggeessaa Cimaan Torbanitti al tokko of gaafachuu qabu-Tamasgeen Axinaafuutiin – Beekan Guluma Erena
GAAFFILEE 22’N Geggeessaa Cimaan Torbanitti al tokko of gaafachuu qabu-Tamasgeen Axinaafuutiin	Beekan Erena
Education July 22, 2016OROMO
GEGGEESSA CIMAA TA’UUF TORBANITTI ALTOKKO GAAFFIWAN KUNNEEN OF GAAFADHU!
Oggumaan gaaffi gaafachuu danda’uu bu’uura milkaa’inaa bizinesii hundaatii.
Maaliis hojjedhu maaliis abjuukee galmaan gahachuuf kaayyoo, karooraa fi karaa ofiikeef itti gaafatamumma fudhattu qabaachuu qabda.Yoo daandii imala irra gochaa jirtuu itti fufuu barbaaddee torbanitti al tokko of gaafachuun dirqama sitti ta’a.
Gaafiwwan kunnenii wajjiin torbee keessa yeroo murtaa’ee dabarsuun karaa dugda handaqoo siif ta’ee irra fuldurratti kaadhuu.
1) Torbee darbe irra maalan baradhee?
Yoo barachuuf kutatee kan jirtu taatee homtuu qabee sidhaabuu hin danda’uu.Yoo fedha barachuu hin qabaanne ammo enyuyuu si gargaaruu hin danda’uu.
2) Torbee darbe keessa waan guddaa an dalage maal turee?
Galma ga’umsi kanaan dura darbe hunduu mo’ichaa kan innii sii kennuuf kakka’umsaa fi ofitti amanamumma kee waan eda’uufii.
3) Torbee darbe wal’ansoo ittiin kan an qabaa ture, torbe dhuftu koo irratti dhiibba fiduu danda’uu maalii?
Wal’aansoo ati har’a gootuu ciminaa kee torbee dhufuuttii waa siif eda’a.
4) Torbee kana hunda dursuun waan an milkeessuu qabu maalii?
Yoo kaayyoo kee isa tokkofaa adda baastee beektee waan dursuu qabuuf dursa laattee sochoota.
5) Torbeen kun haala gaariin akka naaf deemuuf amman tana maal gochuun qabaa?
Karoorri gaariin milkaa’ina kee guddisuun adda godhaa.
6) Torbee koo yaddoo irra hir’isuuf amma maal gochuutu anarra jiraa?
Maaltu akka siyaaddeesuu erga beektee furmaataaf socho’uun salphaa siif ta’aa.
7) Torbee darbee yeroo kee maal irratti gubdee?
Waan sii hin barbaachiisne(hin fayyadnee) kan yeroo kee gubu adda baasii ofirra calaasii.
8) Wanti an dalaguuf deemuu akka dalagamee akkamiinan beekuu danda’aa?
Torbee kana gara galma keettii deemaa jiraachuu kee beekuuf maal gochuu qabdaa?Waan galmaan gahuu barbaadduu sanaaf kaayyoo baasii hojjedhu.
9) Waan galmaan gahuuf deemu kun maaliif waan hojjetamuu qabu fakkaatee natty argamee?
Yoo gaafii maaliif jedhu waliin wal quunnamtii qabaatte akkamiin kan jedhuufi maal kan jedhuuf deebii argattaa.
10) ofii kiyyaan of balleessaan jiraa?
Keessa keetii waa’ee waan yaaddu of eeggadhu.Akka inni duubatti si deebisuuf ykn si hanbisuuf hin eyyaminiif.
11) Maaliin bulchaa jiraa?
Namnii hunduu hojii nii bulchaa.Garuu dirqamaan wanti ati eegaluu qabdu maalii?
12)Carraan ammayyuu ana harkaa hin baanee maalii?
Carraleen barbaachisoo ta’an akka si hin dabbarree gochuuf carraaqi.
13) Maal jijjiruun qabaa?
Kayyoo keetti cichii dhaabbadhu.Garuu kayyoo kee karaa ittiin fiixaan baafattu irratti abshaalomii.
14) Tarkaanfii an goolabe isa kamii?
Galmii ati amma irra geessee dhagaa ka’umsaa atii galma kee kan biroof irra kaatudha.
15) Irra caalaa waan hojjechuun anarra jiru maalii?
Waan hin yaaliin tasumaa baruu hin dandeessuu.
16)Maaltuu ana dhaabuu danda’a jedheen yaadaa?
Sababootaa waan atii kaateef ittiin hojii irra hin oolle yaaduu ofirra dhiisitii sababa tokkotti inni itti hojjechuu danda’u yaadii.
17) fi 18)Gufuuwaan daandii kiyya cuufuu danda’u jedhee eeguu maalii?
Karaa kan biraa ittiin gufuu kana dabartee deemtu itti yaadii malee guufuun waan guddaa mitii.Yaddadhu! Gufuun kan innii sitti argamuu yeroo atii ija kee daandii irraa imaltu irraa kaastudha.
19) Karaa kan biraa ammo maal dalaguun danda’aa?
Daandii foyya’aa ilaaluuf hin sodaatin.Waan haaraalle abuuruu hin sodaatin.
20) Akkamiinan jijjirama fiduu danda’aa?
Waan hojjechuuf uumamte yoo hojjette.
21) Wanti an galatoomfadhu inni guddaan maalii?
Yeroo dukkana cillimiille waan itti galatoomfatan nii jiraa.
22)Namni an galatoomfachuu qabu nii jiraa?
Namnii atii dinqisiifachuu(Ajaa’ibsiifachuu) fi beekamtii laachuufi barbaaddu eenyuu?
23)Milkaa’ina Gonfachuu koo akkamiinan baruu danda’aa?
Milkaa’inni gammachuuf bu’uura osoo hin taanee gammachuutu milkaa’inaaf bu’uura.Waan hojjechaa jirtu yoo jaalatee gammachuu waan argattuuf nii milkoofta jechuudha.
24) Garamitti(eessa gahuufan) imalaa jiraa?
Deebiin gaaffi kanaa akka atii guyyaa itti anuuf kakka’umsaaf humna argattuuf si gargaara.
Egaan, torban kee keessatti yeroo ramaaduun waa’ee fiixaan ba’uumsaa kee kan yaaddu yoo ta’ee yoomiyyuu taanaan akka daandii irra kaatetti of hin ilaaltuu.
Afaan oromotti kan hiikee Tamasgeen Axinaafuuti!
← MORMORII FI FINFINNEE-Abonketi Fayissa’TIIN
THE PURPOSE OF CRITISIZM-Rundaasaa Asheetee fi Addunyaa Dhinsaa →